Jose Mourinho oo sheegay in Antonio Conte Man United bahdilay! – AWDALLAND STATE
HomeSportsJose Mourinho oo sheegay in Antonio Conte Man United bahdilay!
October 24, 2016 Sports, Wararka Soomalida
Tabobaraha Chelsea, Antonio Conte, aya sheegay in aanu “cidna ku maadsanayn” ka dib markii ay kooxdiisu 4-0 ugu awood sheegatay kooxda Man United oo ay ku wada ciyaarayeen garoonka Stambford Bride dadkuna dabbal deggiisii u qaateen inuu ku maadsanayey Jose Mourinho.
Conte ayaa taageerayaasha kooxdiisa ee garoonka fadhiyay gabagabadii ciyaarta ku dhiirriyey inay aad ugu qayliyaan kooxdii ka soo horjeeday, wararka qaarna waxaabay sheegeen in Mourinho markii siidhigii ciyaarta lagu soo xidhayay lagu dhuftay uu ninkan Talyaaniga ah ee Chelsea tabobara ku yidhi waxaad samaynaysa waxay bahdilaad ku tahay “Manchester United”.
Laakiin Conte aya isna yidhi “aniguba ciyaartoy baan ahaan jiray oo aqaan sida dhaqanku yahay. Cid kasta waan ixtiraamaa xataa Manchester United”.
Dalka Faransiiska oo xidhaya xerada qaxootiga ee Calais